Sylvia Aimée · Mey 2018 · Global Voices teny Malagasy
Sylvia Aimée · Mey, 2018
Lahatsoratra farany an'i Sylvia Aimée tamin'ny Mey, 2018
Amerika Avaratra31 Mey 2018
Barack Obama no filoham-pirenena vaovao ao Etazonia. Heveriko fa tsy mety hisy zava-baovao ho an'i Serbia izany (na inona na inona, mivantana be) satria tsy hiova ny politika amerikana mikasika an'i Serbia sy Kosovo. Na izany aza, raha toa tena manaja ireo fampanantenany tamin'ireo fifidianana ny filoham-pirenena vaovao dia tokony...
Paragoay: Mitsipaka Tsy Handray Ny Karamany Ny Filoham-pirenena Vaovao
Amerika Latina30 Mey 2018
Ho avy amin'inona tokoa moa izany no hiatrehan'ny Filoham-pirenena Paragoaiana ny fiainany, eny na dia tsy manana ankohonana ahiana aza izy.
Amerika Latina25 Mey 2018
Azo heverina ho resaka politika ve ny fampodiana an'i Alfonso Portillo, Filoham-pirenena taloha tao Goatemalà ?
Venezoelà: Manao Fandrakofana Fifidianana Amin'ny Alàlan'ny Tambajotra Ireo Olom-pirenena
Amerika Latina23 Mey 2018
Zonao ny mifidy ary zonao ihany koa ny manaraka izany akaiky hatramin'ny farany.
Ejipta: Na Ireo Mpivarotra Zava-Mahadomelina Aza Dia Tia An'i Obama
Amerika Avaratra22 Mey 2018
Tonga amin'ny faratampony iray vaovao ny lazan'i Barack Obama ao Ejipta miaraka amin'ny fampidirana eny an-tsena ny entana iray tsy ara-dalàna mitondra ny anaran'ny filoha vao voafidy.
Amerika Avaratra14 Mey 2018
Avoitran'ity lahatsoratra iray ity amintsika fa tsy ao ambadik'ireo fefy vy irery ihany akory no misy ireo fanosihosena ny zon'olombelona afenina, mangingina ary miafina.